Mandehana mankany Ibiza avy any Madrid mihoatra ny 4 euro | Vaovao momba ny dia
Mandehandeha any Ibiza avy any Madrid amin'ny vidin'ny euro 4 mahery
Carmen Guillen | | Tanànan'ny Espana, Ibiza, tolotra, Inona no ho hita, Tsangatsangana, Flights
Fantatsika rehetra fa rehefa ela kokoa no andrasantsika tahiry ho an'ny fialantsasatra fahavaratra, arakaraka ny vidiny no ahitantsika azy ireo, koa raha te handroso ianao ary mazava fa ho any ny fialantsasatrao amin'ity taona ity Ibiza, amin'ity lahatsoratra ity dia ataonay mora aminao. Mamela anao izahay Ofertas izay hitantsika tao eDreams izay tsy azonao adino.
Ireo dia sidina (lalana iray), izay toerana mora indrindra mihoatra ny 4 euro fotsiny. Raha avy any Madrid ianao na mipetraka somary akaiky dia araraoty ity fotoana tsy ho ela ity. Ny seza farany mijanona! Handeha amin'ny iray amin'izy ireo ve ianao? Miankina amin'ny hafainganam-pandehanao fotsiny amin'ny fanindriana ny fizarana famandrihana.
1 Fifanarahana amin'ny andro
2 Inona no hatao sy jerena ao Ibiza?
Fifanarahana amin'ny andro
Ao amin'io rohy Azonao atao ny mandeha mivantana amin'ilay tolotra noresahinay tamin'ny andalana teo aloha. Araka ny ho hitanao eo, miankina amin'ny fotoana tianao hamakivakiana ary miankina amin'ny andro dia ho mora kokoa ny sidinao. Na dia izany aza, misy andro maromaro hisafidianana ary azonao atao ihany koa ny mijery ilay dia miavaka na tolotra, izay misy tombony bebe kokoa, ny dia dia manana faharetana fohy kokoa noho ny ambiny ary toa tsy ampy izany dia manana valizy voamarina tafiditra ao ny vidiny. Araka ny efa nolazainay, dia fifampiraharahana kely! Ary tsy mifarana eto izany, satria manomboka izao dia hamoaka lahatsoratra tsindraindray amin'ny fifanarahana fitsangatsanganana tsara indrindra izahay. ENY te-handray ireo tolotra ireo ve ianao? amin'ny mailakao Mila tsindrio fotsiny ianao eto ary misoratra anarana amin'ny mailaka fanolorana anay. Tsy hahazo ny lahatsoratra bilaogy rehetra ianao fa ireo izay manome tolotra fihenam-bidy indrindra ihany.
Raha tara amin'ny ny tolotra mora vidy indrindra izay izao dia amin'ny 5,87 euro ho an'ny dia lavitraAzonao atao ny mijery hatrany fa misy tolotra maro hafa eto amin'ny pejy hahazoana vola kely kokoa ... Iza no tsy handeha ho any Ibiza amin'ny vidiny 8,99 euro? Ary amin'ny 16,01 euro? Vidiny adala izy ireo!
Inona no hatao sy jerena ao Ibiza?
Tsy dia misy na tsy azo lazaina momba an'i Ibiza izay tsy mbola fantatsika ... Amin'ny fahavaratra dia lasa cosmopolitan lehibe io nosy io, iray amin'ireo notsidihina indrindra tany Espana, indrindra fa ny tanora ary ny fiainana alina no manjaka ao ... lazao, mazava ho azy, ny morontsiraka sy ny zorony mahafinaritra ary ny rano madio mangarahara ... Na izany aza, avelanay miaraka amin'ny lisitr'ireo zavatra azonao atao sy jerena ao Ibiza. Tsy misy fako io!
Mandroa amoron-dranomasina dia mandehana mitsorika scuba. Ny roa amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto amin'ny nosy dia Cala Bassa y Cala Compte, tena atolotry ny mpandeha. Morontsiraka madio be izy ireo, miaraka amin'izay ilaina rehetra amin'ny mpitsidika, madio ny ranony, tsy dia lehibe aho ary miankina amin'ny ora sy ny andro, tsy dia be loatra izy ireo matetika, satria bitika izy ireo.
Tsy afaka mitsidika an'i Ibiza ianao ary tsy mandalo ny tilikambo piraty for jereo ny filentehan'ny masoandro. Iray amin'ireo fotoana majika indrindra iainanao eto amin'ny nosy!
Jereo ny nosy Vedrá io. Iray amin'ireo zavatra ataon'ny mpizahatany sy ny Ibizana indrindra. Raha ny filazan'izy ireo, ny fandinihana ity nosy kely ity izay manome fiainana ny nosy Ibiza, dia manome anao tanjaka sy tony. Ataon'izy ireo toy ny hoe mahatsapa arovan'ny nosy mihitsy izy ireo.
Raha eo amin'ny nosy Ibiza mahafinaritra ianao dia tsy afaka manadino nosy iray hafa tsara tarehy kokoa na tsara kokoa: Formentera. Raha mitsidika ny roa ianao dia tsy te hisalasala ny hamerina ilay zavatra niainana.
Mandehana isaky ny fety ary manaova fipoahana! Mila mandany minitra vitsy any Ibiza ianao vao hahalala ny fety rehetra azonao jerena ao. Ary manana fomba roa hiainana azy ianao: amin'ny fomba madio sy ara-dalàna na amin'ny endrika kapa manja sy bikini na akanjo ba misy akanjo itambarana ny fahafinaretana roa amin'ny nosy: ny morontsiraka sy ny fety. Saika hiloka amin'ity farany izahay.
manandrana ny mojitos tsara indrindra ho afaka hanandrana ny vavanao. Vitan'ny Breziliana avy any Cala Saladeta izy ireo. Tsy mila mangataka fotsiny ianao dia ho lazain'izy ireo ianao. Fantatra tsara izany!
Manome anao a fandroana fotaka voajanahary, izay mora ampiasaina foana ho an'ny hoditra. Azonao atao amin'ny amoron-dranomasina maro any Ibiza sy Formentera izany ary maimaim-poana izany.
Aza adino ity mahafinaritra manolora sidina mankany Ibiza Manolotra anao avy amin'ny eDreams izy ireo. Na efa fantatrao ny nosy na mbola tsy nahafinaritra anao ny mitsidika azy: Araraoty!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Mandehandeha any Ibiza avy any Madrid amin'ny vidin'ny euro 4 mahery
Languedoc, fahavaratra any Frantsa
Toerana 11 tokony ho hitanao ao Asturias